मिडिया > जर्नल उत्तराधिकार > पत्रिका उत्तराधिकारी 2018-04 > कुन राम्रो उपहारहरू छन्?
राम्रो उपहार के हुन्?
जब म भगवान्को वरदान हेर्छु, म देख्छु कि उसले जीवन दिन्छ। उज्यालो, प्रकृतिको महिमा, सुनौलो सूर्योदय, हिउँले ढाकिएको चुचुराहरू माथि सूर्यका उज्यालो रंगहरू, जsts्गलहरूको रमणीय हरियो, फूलहरूले भरिएको मैदानमा रंगहरूको समुद्र। म अरू धेरै चीजहरू देख्छु जुन हामी उनीहरूको लागि केहि समय लिन्छौं भने मात्र हामी उनीहरूको प्रशंसा गर्न सक्छौं। तपाईको विश्वास के भए पनि भगवानले हामीलाई यी सबै थोक प्रशस्त मात्रामा दिनुहुन्छ। विश्वासी, नास्तिक, अज्ञेयवादी, अविश्वासी र अन्य विश्वासी सबैले यी राम्रा उपहारहरू लिन सक्दछन्। धर्मी र अन्याय गर्नेमाथि परमेश्वरले वर्षा पार्नुहुन्छ। उसले सबैलाई यी राम्रो उपहार दिन्छ।
टेक्नोलोजी, निर्माण, खेलकुद, संगीत, साहित्य, कला - मा सूची अनन्त हो कि के हो, मानिसहरूसँग कस्तो अचम्मको कला हो सोच्नुहोस्। भगवानले सबैलाई क्षमता दिनुभयो। सबै मूलका मानिसहरूलाई प्रशस्त आशिष्‌ दिइयो। यी क्षमताहरू कहाँबाट आउँदछन्, यदि ज्योतिका पिताबाट होइन भने, सबै राम्रा उपहारहरू प्रदान गर्ने?
अर्कोतर्फ, संसारमा धेरै दु: ख र शोक छ। मानिसहरू घृणा, लोभ, निर्दयीता र चीजहरूको भँवरातिर खिचिएका छन् जसले ठूलो कष्ट दिन्छ। तपाईले विश्‍व र यसको राजनीतिक झुकावलाई हेर्नुपर्दछ कि यो कत्तिको गम्भीर छ भनेर हेर्नको लागि। हामी दुबै राम्रो र नराम्रो संसारमा र मानव प्रकृतिमा देख्छौं।
यस संसारमा राम्रो र नराम्रो भेट्ने विश्वासीहरूलाई परमेश्वरले कस्ता सुन्दर उपहारहरू दिनुहुन्छ? यी धेरै व्यक्तिहरू हुन् जसलाई जेम्सले प्रोत्साहन दिन यसलाई अत्यन्तै विशेष कारणको रूपमा हेर्न उत्साहित हुन्छन् जब उनीहरू सबै प्रकारका परीक्षणहरूमा जानु पर्छ।
दुर्भाग्यवस, हाम्रा गल्तीहरूको कारण, हामी दोषी जीवनको साथ संघर्ष गर्दछौं। कोहीले आफ्नो दोष प्रमाणित गर्न कोशिस गर्छन्, तर त्यो बाँकी छ।
येशूले यो पनि भन्नुभयो कि ज्योतिका बुबा र असल उपहारका दाताले हामीलाई पवित्र आत्माको वरदान दिनुहुनेछ - जुन हाम्रो मानव आमाबाबुले भन्दा बढी गर्न सक्नुहुन्छ। उनले आफ्ना चेलाहरूलाई आफू आफू जाँदैछु भनेर आश्वासन दिए तर उनको बुबाको यो प्रतिज्ञा Jo: १ मा पूरा भयो जुन पेन्टेकोस्टमा भयो। पवित्र आत्मा तिनीहरूमा अवतरण गर्नुभयो र त्यसबेलादेखि सबै विश्वासी इसाईहरूसँगै रहेको छ।
गलाती 5,22: २२-२23 ले पवित्र आत्माले हामीमा ल्याउने फलको बयान गर्दछ। यस फलका नौ पक्षहरू छन्, शुरू गरेर र प्रेममा इम्बेड गरिएको। किनभने भगवान्‌ले सर्वप्रथम हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, हामी "हामी आफैंले हाम्रा सबै हृदय र छिमेकीहरूलाई परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरलाई प्रेम गर्न" सक्षम छौं। प्रेम यति महत्त्वपूर्ण छ कि १ कोरिन्थी १ 1 मा पावलले यसको बारेमा परिभाषा लेखे र हामी त्यसबाट के हुन सक्दछौं भनेर वर्णन गर्दछ। ऊ निष्कर्षमा पुगे कि त्यहाँ बाँकी तीन कुराहरु छन् - विश्वास, आशा, र प्रेम, तर प्रेम ती मध्ये सबैभन्दा ठूलो हो।
यसले हामीलाई उद्धार, मुक्ति र अनन्त जीवनको आशामा जीवित परमेश्वरका सन्तानहरूको रूपमा बाँच्न अनुमति दिन्छ। जब कठिनाइहरू आउँछन्, हामी अलमल्लमा पर्न सक्छौं र आशा पनि गुमाउन सक्छौं, तर यदि हामी प्रभुको निम्ति पर्खिरहेका छौं भने, उहाँ हामीलाई पार गर्नुहुनेछ।
मुक्ति, क्षमा, शान्ति, आशा, प्रेम र एक साधारण भावना विश्वास गर्नेलाई प्रतिज्ञा गरेका राम्रा उपहारहरूमध्ये केहि हुन्। तपाईं धेरै वास्तविक हुनुहुन्छ। येशू ती सबै भन्दा पनि वास्तविक हुनुहुन्छ। यो हाम्रो मुक्ति, हाम्रो क्षमा, हाम्रो शान्ति, हाम्रो आशा, हाम्रो प्रेम र हाम्रो सामान्य ज्ञान - पिताबाट आउने सबैभन्दा उत्तम र सब भन्दा उत्तम उपहार हो।
जो विश्वासीहरू होइनन्, जे होस् नास्तिक, अज्ञेयवादी वा अन्य विश्वासीहरूले पनि यी राम्रा उपहारहरू लिनुपर्दछ। येशू ख्रीष्टको मृत्यु र बौरिउठाइ मार्फत मुक्तिको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर र परमेश्वरले उनीहरूलाई पवित्र आत्मा दिनुहुनेछ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दै तपाईंले नयाँ जीवन र सबै असल वरदानहरू दिनुहुने परमेश्वरसँग ईश्वरीय सम्बन्धको अनुभव गर्नुहुनेछ। छनौट तपाईंको हो।
Eben D. Jacobs द्वारा